Torolàlana momba ny fifantina teknolojia - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
RESOURCES / Torolàlana momba ny fisafidianana teknolojia
Ity ny lisitra fitarihana ny fisafidianana teknolojia, misy ny famaritana, ny lafy ratsy sy ny mikraoba hafa toy ny etsy ambany, azonao atao ny manamarina azy amin'ny antsipiriany rehetra ary avy eo misafidy ny fomba prototyping tsara indrindra.
Famaritana: Stereolithography dia dingan'ny fanamboarana fanampiny izay mampiasa laser amin'ny fanasitranana ny sosona manify ao anaty vatam-pitateram-pitaterana UV-sensitive. Ny famahana ny maodely dia azo ovaina amin'ny fanovana ny "haben'ny toerana" sy ny hatevin'ny sosona. Ny haben'ny toerana sy ny hatevin'ny sosona kely kokoa dia mampitombo ny famahana ary koa mampitombo ny fotoana sy ny vidin'ny fananganana. Ny maodely SLA dia azo zahana aorian'ny fikirakirana isan-karazany. Ampidiro ao ny fanesorana sy fanadiovana ireo faritra, namboarina tamin'ny fasika sy vakana, izay mety amin'ny famerenana injeniera. Mety ho vitaina ihany koa ny maodely SLA ary haingoina mba hanomezana sary azy tsara.
Tombontsoa: Ho an'ny maodely na maodely azo ampiasaina ho tompo amin'ny fomba prototyping hafa, ny teknikan'ny prototyping haingana an'ny SLA dia afaka mamokatra faritra misy geometrika saro-takarina sy famaranana tsara indrindra raha ampitahaina amin'ny fizotran'ny aditif hafa.
Tsy azo atao amin'ny ampahany SLA matetika ny fanandramana mandeha, satria manjary malemy kokoa noho ny ampahany vita amin'ny resina injeniera izy ireo. Ny lafiny fanasitranana UV amin'ny fizotrany dia mahatonga ireo faritra mora tohina amin'ny fihoaran'ny masoandro. Na eo aza ny fahafahany mamorona faritra sarotra, ny fizotrany dia tsy manome famantarana ny famokarana farany ny endrika.
Fitaovana azo ampiasaina: UV manasitrana photopolymer, mitovy amin'ny ABS.
Hery matanjaka: Mahantra
Ny hatevin'ny rindrina ambany indrindra: 0,5mm
Famaranana ety ivelany: malama miaraka amin'ny tsipika sosona Famaranana aorina
Famaranana faharoa: Sanding, fanapoahana fasika, famolahana, hosodoko, fanontana, fametahana vacuum
Andro mahazatra hamokarana: 2-5 andro
Mifanohitra amin'ny famokarana volume: Fizarana 1-10
Vidiny isam-pizarana: Fizarana tokana
Modely momba ny hevitra: Eny
Modely fampisehoana: Eny
Prototypes miasa: Tsia
Fanamarinana ny endrika sy ny injeniera: voafetra
Fikarohana momba ny tsena voalohany: tsia
Famokarana somary ambany: Tsia
Fiomanana amin'ny fivoriambe sy fanaraha-maso: No.
Famaritana: ny fizotran'ny SLS dia mampiasa laser mba hananganana faritra amin'ny alàlan'ny sinter (fusing) sosona vita amin'ny vovoka isaky ny ambany. Ny faritra famokarana prototype SLS dia mety ho marina sy maharitra kokoa noho ny faritra SLA, saingy ny farany dia mahantra ihany amin'ny fahatsapana voa na fasika. Mihena ny tanjaka eo anelanelan'ireo sombin-kazo mitambatra, noho izany ireo ampahany dia hanjary malemy kokoa noho ireo ampahany vita amin'ny masinina na miorina amin'ny resina iray ihany. Ho fanampin'izany, vitsy dia kely ny resins azo alaina amin'ny endrika vovoka izay takiana amin'ny SLS.
Tombontsoa: Ny fanodinana dia afaka manamboatra faritra sarotra izay mateza kokoa sy marimarina kokoa noho ny faritra SLA.
Maharatsy: Ireo faritra ireo dia manana endrika voamaina na fasika ary matetika tsy mety amin'ny fitsapana miasa noho ny fihenan'ny toetrany mekanika. Na dia afaka manamboatra ampahany amin'ny geometry sarotra aza ny SLS, dia tsy manome fanazavana momba ny famokarana farany ny endrika.
Fitaovana azo ampiasaina: Nylon nanasitrana tamin'ny laser
Ny hatevin'ny rindrina ambany indrindra: 0.8mm-1.2mm (miankina amin'ny jeometry)
Famaranana ety ivelany: henjana miaraka amin'ny volon-koditra vita Famaranana aorina
Famaranana faharoa: Sanding, fanapoahana fasika, hosodoko, fanontana
Famaritana: ny plastika marihitra vita amin'ny plastika dia miraikitra ao anaty masininina cnc ary tapahina ho tapany vita. Ity fomba fanamboarana haingana ity dia miteraka tanjaka ambony sy famaranana ambonimbony amin'ny fizotran'ny aditif. Izy io koa dia manana ny toetra feno, homogenous an'ny plastika, mifanohitra amin'ny fizotran'ny fanampiana izay mampiasa fitaovana "plastika toy" ary atsangana. Ny karazana safidy ara-materialy dia mamela ny ampahany hatao amin'ny fananana ara-nofo tadiavina, toy ny: tanjaka mahery, fanoherana ny fiatraikany, hafanan'ny fihenan'ny hafanana, fanoherana simika ary fampifanarahana biolojika.
Tombontsoa: Mamokatra ampahany matanjaka miaraka amina famaranana prototype tsara. Mety amin'ny fanombanana sy fanandramana injeniera. Ny maodely dia azo alefa amin'ny alàlan'ny plastika, aliminioma, manezioma, na ankamaroan'ny metaly hafa. Ny fandeferana tsara dia manome ampahany mety amin'ny fitiliana mety sy azo ampiasaina. fanamboarana haingana Prototypes dia azo atolotra amin'ny andro toy ny fizotran'ny dingana.
Maharatsy: Ny ampahany geometry dia azo ferana noho ny toetran'ny machining CNC. Mety ho lafo ny fizotrany satria ilaina ny mpandahatra fandaharana sy ny milina hamoronana sokajin-tsolika CNC ary hametahana ireo faritra.
Fitaovana azo alaina: naoty injeniera marobe
Ny hatevin'ny rindrina ambany indrindra: 0,5mm-0.8mm (miankina amin'ny jeometry)
Famaranana ety ambonin'ny: Famaranana malefaka avo lenta aorian'ny famoronana fananganana
Famaranana faharoa: Sanding, fanapoahana fasika, famolahana, hosodoko, fanontana, fanosorana volo ary Chemica, fanodinkodinana, firakotra vovoka
Andro mahazatra hamokarana: 3-8 andro
Mifanohitra amin'ny famokarana volume: Fizarana 1-50
Prototypes miasa: Eny
Fanamarinana ny endrika sy ny injeniera: Ie
Fikarohana momba ny tsena voalohany: Ie
Famokarana ambany be: voafetra
Fiomanana amin'ny fivoriambe sy fanaraha-maso: Eny
Famaritana: ny fanariana vacuum dia dingana teknika fanodinana haingana izay ampiasaina amin'ny famoronana modely maro amin'ny fampiasana maodely tokana ho modely. Ny maodely maoderina, namboarina matetika tamin'ny alàlan'ny fizotry ny SLA na ny CNC, dia vita ary vita amin'ny endriny mba hanamboarana ny vokatra farany. Narotsaka ny ampahany amin'ny silipo silipo, ary rehefa sitrana dia esorina ny maodely maoderina, mamela ny atiny sy ny lavaka afaka mamokatra hatramin'ny 25 kopian'ny tany am-boalohany. Ny bobongolo avy eo dia ampidirina amin'ny urethane thermoset resin-dronono izay azo volena miloko, ka miteraka faritra izay mitovy endrika amin'ny famokarana, ary azo ampiasaina amin'ny tombana sy ny fanombanana asa, ary koa ny fanandramana voafetra.
Tombontsoa: Ahafahanao manao kopia maodely marobe haingana, nefa mampiditra loko sy firafitra manokana. Betsaka ny fananana mekanika sy durometre. Ny bobongolo vita amin'ny silika azo ovaina dia mamela anao hamolavola endri-javatra sasany izay tsy azo foronina amin'ny fomba mahazatra raha tsy misy fitaovana manokana, mitazona ny vidiny. Azo ovaina ao anaty tsofoka sy fihoaram-pefy.
Maharatsy: urethanes thermoset dia tsy solontenan'ny thermoplastika miorina amin'ny tsindrona. Fitsapana miasa voafetra. Ny fiovaovana amin'ny famoronana sy ny famitana ny maodely maoderina, ny fanamboarana ny bobongolo vita amin'ny silika, ary ny famolavolana sy ny famitana ny filatsahana dia mety hisy fiatraikany amin'ny marina.
Fitaovana azo ampiasaina: Polyurethanes maro, fahasamihafana miovaova.
Ny hatevin'ny rindrina ambany indrindra: 0.6mm-1.0mm (miankina amin'ny jeometry)
Famaranana ery ambonin'ny: famaranana avo lenta aorian'ny famitana asa
Andro mahazatra hamokarana: 5-8 andro
Mifanohitra amin'ny famokarana volavola: Fizarana 10-100
Vidiny isam-pizarana: Fizarana ambany volume
Modely momba ny hevitra: tsia
Famokarana ambany be: Eny
Fiomanana amin'ny fivoriambe sy fanaraha-maso: voafetra
Famaritana: Rehefa tsy vonona amam-bolana ny famokarana fitaovanao dia fomba tsara handraisana faritra haingana sy lafo vidy ny famolahana tsindrona haingana. Afaka mampiasa fitaovana sy teknika isan-karazany mba hamoronana fitaovana tetezana amin'ny fitsapana sy fanombanana ny prototype. Ny bobongolo-tsindrona haingana dia azo vokarina amin'ny vy vy, aliminioma, P-20 na vy avo lenta. . Raha vonona ny hiditra amin'ny famokarana ianao, araraoty ny milina haingam-pandeha, ny EDM, ny milina fanenomana tsindrona ary ny fitaovana maro karazana. Ary amin'ny fanolorana fitaovam-pitaovana haingana sy famolavolana tsindrona dia azonao haingana kokoa ireo faritra sarotra sy be pitsiny ary mihena ny vidiny.
Tombontsoa: afaka mamonjy prototypes sy fohy famokarana prototype famokarana maotera thermoplastics ambaratonga haingana, mampihena ny fotoana mankany amin'ny tsena. Mitantana mora foana ny risika alohan'ny hidirana amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny fahafaha-mamorona mba hamoronana faritra vita amin'ny tsindrona manokana. Azonao atao ny mampiasa an'io fitaovana io amin'ny famokarana voalohany na ho safidy averina raha toa ka tara na miandrasa fiovana ny fitaovanao.
Cons: "Ny vidin'ny fitaovana dia mety hahatonga ny fizotran'ny asa ho lafo kokoa noho ny hafa amin'ny fizahana voalohany, fa ny vidiny isaky ny tapany dia matetika ambany kokoa noho ny fizotran'ny fametahana na ny milina CNC."
Fitaovana azo alaina: thermoplastika rehetra
Famaranana eo ambonin'ny: Fahamarinana avo lenta Tsy misy takiana
Famaranana faharoa: Misy ny famaranana rehetra
Andro mahazatra hamokarana: 15-35 andro
Mifanohitra amin'ny famokarana volavola: ampahany 100-50000
Vidiny isam-pizarana: Famokarana avo lenta
Cnc Prototyping, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana,